Shoe Futhi Isikhumba Abasebenzi Futhi abalungisi bethempeli Job Description / Izindima Futhi Ukuziphendulela Sample – JobDescriptionSample.org
Ikhaya / Ukukhangisa / Shoe Futhi Isikhumba Abasebenzi Futhi abalungisi bethempeli Job Description / Izindima Futhi Ukuziphendulela Sample
superadmin Juni 28, 2016 Ukukhangisa Shiya amazwana 758 Ukubukwa
Hlanganani, kuhlobisa, noma ukubuyisela isikhumba lesikhumba-like izinto, ezifana ngokwesibonelo wemithwalo, nezicathulo.
Sika izitayela ngqo ukuthi ukuphi okwalandela, izakhi noma uchaza, ukusebenzisa isikere, imithi, imimese, noma umshini ukuchofoza.
Thuthukisa, bahlobise, noma buyisela yemikhiqizo yesikhumba ngokuvumelana-izici, usebenzisa uthunge izinaliti yabo bonke abakhululekileyo nabayizigqila, imishini lacing, unamathele amathuluzi esandleni, noma izipikili.
Hlela futhi anamathelayo noma ithungwe imithombo enjenge ugodo, noma izinto, uvolo, buckskin, ukubamba iqhaza ezindaweni.
Umbala, izinsiza ezahlukene ukuba nemiphumela ukuthi oyifunayo noma bazogcwalisa, ukuthuthukisa, Umbala, cindezela, thunga, ukumaka noma uqophe lesikhumba, Umumo, noma imiklamo.
Khetha izinto amaphethini, futhi trace amaphethini ungene imikhiqizo ukuba cutout.
Zokugqoka kanye nezicathulo ngokuvamile ephelele njengoba by ilungiswe imiphetho umhloli omusha kanye izithende maqondana isimo nezicathulo.
Esondele izindleko amasevisi noma imikhiqizo wabuza kuhlanganise amateki ngezifiso noma izicathulo ukukhanda, bese izindleko ezivela kumakhasimende.
Engeza insoles Boot uyaqhubeka, ukubeka nezicathulo nokuqalisa amaphampu kanye outsoles, futhi uppers.
usimende, uzipho, noma ithungwe izithende futhi wake ukuze izicathulo.
Ifomu izicathulo izithende ngommese, nasodakeni lezi phezu isondo buffing ngoba kuphela.
Buyisela noma ushintsho iphampa izinyawo, kanye nezinye izingxenye izicathulo amateki, nokusebenzisa izimpahla, uthunge, buffing namanye amadivayisi ukuqalisa ukulungisa, futhi igiya.
Yakha, guqula, futhi ukulungisa izicathulo evuthayo noma okubuyisela ngokuhambisana odokotela’ izixazululo, noma ukuguqula amateki khona abantu specialneeds nezinyawo izinkinga.
Sesimo sokuphinda kwenziwe futhi ukulungisa izinto isibonelo football mitts, futhi iziqu, izikhwama, izicathulo, Izihlalo, amabhande, zemali.
Indawo nezicathulo uyaqhubeka ukususa izithende futhi umhloli, sisebenzisa impintshisi noma imimese.
Hlanzani nokuthuthukisa izicathulo.
Qinisekisa ukuthungwa isikhumba sika, umthunzi, futhi ihlala isikhathi eside ukuqinisekisa ukuthi elanele umsebenzi abahlukene.
Hlola izixazululo noma Ukucaciswa, futhi thatha izilinganiso ukucacisa uhlobo lomkhiqizo ukudaleka, kuqashwa calipers, izenzo tape, noma izimiso.
Hlola izihloko amaphutha, futhi ususe izindawo ezisetshenzisiwe noma ezilimele, sisebenzisa isandla-amathuluzi.
Asebenza noma ushaye emaphaketheni futhi ushumeke noma ukuxhuma steel ubucwebe, uphatha .
Namathisela imidwebo noma izingxenye ukuze zihlobise noma unogada izinto.
isimo, slice, ukufaka, futhi paddings evikelekile, ukupheda, noma ukwakheka, ukusebenzisa induku noma ijoyina.
Umthengi Ukucaciswa, futhi uchaze noma ukubekwa amaphethini emsebenzini izingxenye, usimende isikhunta, noma alethe amaphethini, usebenzisa izilinganiso, izitayela.
Linganisa abathengi ngoba isudi, futhi nixoxe nge lezi uhlobo izicathulo babe eyakhelwe, Imininingwane uhlongoza kuhlanganise lesikhumba izinga.
Nweba izicathulo, kuhlanganise ne alo futhi Ukuncipha izingxenye izingcezu, sisebenzisa i traction adjustable.
Uzipho isithende-futhi-uzwane cleats ungene izicathulo.
Yenza izikhundla, isithende pads, bese idonsa kusukela iveza abathengi’ izinyawo.
amalunga omzimba Resew, bese ushintsha indlela yokwenza namakheli totes noma umthwalo.
Ukufunda Ulwazi-Ulwazi izigaba futhi izigaba abhalwe wamaphepha umsebenzi ezihlobene.
Active-Ukulalela-Wethule ukunakwa yonke kulokho abanye abantu bagomela, ukuthola isikhathi namandla ukuqonda imininingwane eyenziwayo, nezindaba ngizibuza okwathiwa ifanele, kunokuba mesmerizing ngezinye izikhathi ayilungile.
Ukubhala-Ephepheni njengoba esifanele izidingo zezilaleli ukhuluma ngempumelelo.
Ukukhuluma-Ukuxoxa nabanye ukwabelana amaqiniso ngempumelelo.
Izibalo-Lisebenzisa izibalo ukulungisa izinkinga.
izindlela Technology-Lisebenzisa nezimiso emitholampilo ukuxazulula izinkinga.
Criticalthinking-Lisebenzisa isizathu nokucabangisisa ukuqaphela izimfanelo nokushiyeka komngane Imiphumela, amakhambi noma izindlela nezindaba.
Active Learning-Ulwazi Imininingwane omusha ramifications ngekusasa ngamunye futhi yakamuva izinkinga kanye izinqumo.
Ukufunda Strategies-kuqashwa ngitsatse izindlela educationORinstructional namasu buyafaneleka coaching inkinga noma lapho usukwazi ukudlala kahle ezindabeni fresh.
Tracking-CheckingORDetermining ukusebenza labantu ezengeziwe, ukuthuthukisa indlela esibukeka ngayo, noma izinkampani cabanga ngezenzo zokulungisa noma ukukhiqiza kwentuthuko.
Komphakathi Perceptiveness-Ukuba hhayi unaware of othersI ukusabela kungani beziphatha ngoba benza nolwazi.
izenzo Coordination-Ukushintsha mayelana nabanye’ izenzo.
Azithenge-Begging abanye ukuguqula ukuziphatha noma imicabango yabo.
Ingxoxo-Ukunikeza abanye ngokuhlanganyela nokuzama buyisana ukuhlukahluka.
Ukufundisa-Ngokufundisa abanye indlela ukuthatha isinyathelo.
Amasevisi Orientation-Ngobuqotho ngifuna amasu ukusekela abantu.
Advanced Inkinga-Ukuxazulula Ukuthola izinkinga eziyinkimbinkimbi nokubuyekeza lolwazi kuhlobene ukuhlola ukukhiqiza ongakhetha futhi zisebenza izimpendulo.
Operations Research-Ukutadisha izidingo kanye ukucacisa komkhiqizo ukwenza isendlalelo.
Engineering Design-Technologies ukusiza umuntu futhi uzivumelanise imikhiqizo noma izidingo isakhiwo.
Isisetshenziswa Ukukhethwa-Ukunquma ngohlobo lomshini bese amathuluzi adingekayo sina ukwenza umsebenzi.
amathuluzi Ukufakwa-Ifaka, imikhiqizo, Izintambo zikagesi ezisobala, noma amaphakheji ukuhlangabezana Ukucaciswa.
izicelo Programming-Ukukhiqiza ikhompyutha mayelana nokusetshenziswa ukuthi baningi.
Operations Tracking-Ukuqaphela nezinye izimpawu, dials, noma ukuhlolwa ukuze uqiniseke ithuluzi elithile lisebenze isebenza ngempumelelo.
Ukuqhuba Phatha-Ukuvimbela ukusebenza kwezinhlelo noma imikhiqizo.
Isisetshenziswa Isondlo-Buciko ukunakekela gear kanye kokunquma uma futhi yeka ukuthi luhlobo luni yokondla kuyadingeka.
Ukuxazulula-Inquma ngezimbangela zezinkinga eziphathelene eziya ezisebenza nokukhetha lokho isiqondiso ukuya nanoma-ke.
Ukubeka-Ukubeka amadivayisi noma imishini sisebenzisa impahla edingekayo.
Quality-Control Ucwaningo-Ukwenza izivivinyo kanye ukuhlolwa imikhiqizo, amasevisi, noma izinqubo ukuhlola ukusebenza noma izinga.
Ukwahlulela Isinqumo Ukwenza-Uma ucabangela izinzuzo kanye amacala isihlobo yokuziphatha ukuthi kukhona abantu abazoba athole elizokusiza kangcono.
Ukuhlaziya-Inquma ukuthi luhlobo luni inqubo kufanele zisebenze futhi indlela ushintsho izinqubo, izimo, kanye nesibekandzaba kungaba nomthelela izinzuzo.
Izindlela Ukuhlolwa Ukuthola izinyathelo noma izinkomba ukusebenza ngokuhambisana shaqa umshini ezifanele noma ukuziphatha kwakudingeka sina zokuthuthukisa nokusebenza.
Isikhathi Ukuphathwa-Ukulawula abanye’ isikhathi futhi oneis isikhathi yangasese.
Ukuphathwa lwezezimali Resources-Ukunquma indlela imali kuzoluqinisa esetshenziswa ukuba umsebenzi owenziwa, futhi yokuthengisa mayelana nala izindleko.
Ukuphathwa Material Amafa-Ukuthola nokubona ukusetshenziswa efanele izinsiza, amadivayisi, kanye nemikhiqizo okudingekayo ukwenza umsebenzi othize.
Ukuphathwa Yezisebenzi Resources-Ugqozi, ukudala, futhi ziqondisa abantu ngenkathi besebenza, ukuhlukanisa abantu best for umsebenzi.
Level Isikole samabanga aphezulu (noma kukaGedaliya noma Senior High School kwefrakshini Certificate)
Ezinye Training College
Kuyaphawuleka esingaphansi Isikolo samabanga aphezulu Level
Imphumelelo / Umzamo – 81.57%
ukuphikelela – 77.67%
Ukuphathwa – 76.72%
Matter mayelana Abanye – 85.96%
Ukuzithiba – 78.55%
ukucindezeleka Tolerance – 78.61%
Ukuqaphela Yokuxhumana – 85.99%
Analytical Ukucabanga – 76.01%